Abacoci abaBalaseleyo-Ukucocwa kobungcali eLondon
GB xh Ngena
Real Estate Listings: » Business Directory » Cleaning Contractors » GB » Abacoci abaBalaseleyo-Ukucocwa kobungcali eLondon1
ipapashiwe 3 years ago
Indawo yewebhu:: https://fantasticcleaners.com/
Ikhowudi yeposi: SE1 2TH
Abacoci abaBalaseleyo babonelela ngeenkonzo zokucoca ngobuchule kulo lonke elaseMpuma, eNtshona, eMzantsi naseMantla eLondon. Iinkonzo zokucoca ngobungcali zenzelwe umninikhaya, umqeshi wezindlu kunye nomnini-mhlaba ngokunjalo. Amagcisa okucoca aza kuxukuxa, acoce, acoce, abulale iintsholongwane, athobe uthuli, agungxule, akorobhe, athabathe, ahlambe, ahlikihle, athabise, athabise, atshayele, atshayele, ahlambe, asule, ahlambe, deodorise, thintela nokunye ! Zeziphi iinkonzo zokucoca ekhaya Abacoci abahle kakhulu abanokukunika: Ukucoca indlu / ukuncedisa emakhaya ukukunceda kwimisebenzi yesiqhelo Ukuphela kokucoca indawo yokuhlala - unyango lwasemva kokuqesha ukuqinisekisa ukubuyiselwa kwemali yakho Ukucocwa kweeofisi - ukugcina ucoceko kunye nempilo emsebenzini Ukucoca ifolokhwe - iisofa, oomatrasi, iisofa kunye Ukucocwa kwefestile - ukuhlanjwa kwangaphandle kunye nepolishi yokucoca ikhaphethi yobuchwephesha - ukucoca amanzi ashushu, ukucoca ikhaphethi eyomileyo nokunye Emva kokucoca izinto zokucoca - ukukhathalela inkunkuma kunye nokungcola okugqithisileyo Ukupheka nokucoca i-oveni - ukucoca i-oveni ngesidlo esimnandi Ukucocwa kwegutter - ungaze ukhathazeke malunga Abacoci abaBalaseleyo baseLondon babonelela ngeenkonzo zokucoca izindlu ezithe tyaba okanye izindlu kwiipropathi zabucala nezentengiso. Bonke oochwephesha bokucoca esibabonelelayo banamakhono aphakamileyo kwaye baya kwenza umsebenzi wokucoca ngamnye ngononophelo olufanelekileyo kunye nokuqwalaselwa njengoko kulindelwe licocwa elihle ngokwenene. Amagumbi okuhlambela - indawo yokuhlambela kunye nokuchama Iikhitshi - ukucoca izixhobo zokusebenza, ukucoca amanzi kunye nokususa igrisi kunye nokunyeUkuhlala kunye negumbi lokutyela - ukucoca ifenitshala, ukucoca ikhaphethi kunye nokunye Amagumbi okulala - ukusula ubumdaka, ukususa uthuli, ukucoca izinto ezingaphezulu nokunye Ukuphela kokucoca indawo yokuhlala - Ukuphela kwezindlu zokucoca irente. Iinkonzo zokucoca ekhaya Iindawo zaseLondon esizigubungelayo zingaphaya kweLondon- eMpuma, eNtshona, eMzantsi naseMantla. Izinto ezicocekileyo nezicocekileyo ziya kucoca ukusuka phezulu kuye ezantsi kwaye zisuse konke ukungcola, uthuli, ukungcola okanye amabala akho kwipropathi yakho. Onke amaqela okucoca axhotyiswe ngokupheleleyo ngezixhobo zobuchwephesha obuphezulu kunye nezicoci ezingafumanekiyo kuluntu ngokubanzi. Kutheni le nto i-Fantastic Cleaners iyona nkampani ilungileyo yokucoca eLondon? Ukucoca imisebenzi. iinkonzo zokucoca ezizodwa njengokucoca izinto zobungcali, ukucoca ikhaphethi, ukucoca nokucoca ezomileyo kunye nokucoca ikhuselo kwindawo, ifestile yangaphandle yokusula nokulungisa iinkonzo zokuhlala kunye nezorhwebo kunye nekhitshi licocekile lisebenzisa indalo esingqongileyo. iimveliso zokucoca ezinobungane nezinokutsha
020 3404 xxxx Veza
Ibhaliswe kwi 7. Feb 2017
Nxibelelana nentengiso 020 3404 xxxx
Ibhaliswe kwi February 7, 2017
Khetha udidiResidential homes Houses Apartments Flats Rooms Townhouses Studios Cottages BungalowsLand lots Residential Land Agricultural LandGarages and parking places Parking garagesCommercial Real Estate Office spaces Industrial premisesAll Others Real Estate All Others Real EstateBusiness Directory Financial Service Providers Moving Companies Home Improvement Contractors Home Inspection Services Construction Companies Cleaning Contractors Design Services Pest Control Furniture CompaniesReal Estate Agent Directory Real Estate Agents
I-United Kingdom ye-Great Britain kunye ne-Northern Ireland, eyaziwa njenge-United Kingdom (i-UK okanye i-UK) okanye i-Bhritane, lilizwe elizimeleyo elikumantla mpuma kunxweme lwe-Europe. I-United Kingdom ibandakanya isiqithi sase-Great Britain, indawo esemantla mpuma yesiqithi sase-Ireland, kunye nezinye iziqithi ezincinci. I-Northern Ireland yabelana ngomda womhlaba kunye neRiphabhlikhi yase-Ireland. Ngaphandle koko, i-United Kingdom ijikelezwe luLwandlekazi lweAtlantic, kunye noLwandle oluseMantla ngasempuma, i-English Channel emazantsi kunye noLwandle lweCeltic kumazantsi-ntshona, inika elunxweme olwe-12 olude olude emhlabeni. Ulwandle lwaseIreland lwahlula iGreat Britain neIreland. Indawo e-United Kingdom iyonke ziikhilomitha ezingama-940,000 zeekhilomitha (240,000 km2). I-United Kingdom yipalamente engamanyani yedemokhrasi kunye nobukhosi obukhoyo kumgaqo-siseko. Lo kumkani nguKumkanikazi uElizabeth II, olawula ukusukela ngo-1952, emenza oyena mntu ubambeleyo emhlabeni jikelele. Idolophu elikomkhulu lase-United Kingdom yi-London, isixeko sehlabathi kunye neziko lezemali elinabemi basezidolophini abali-10.3 yezigidi. I-United Kingdom inamazwe amane: i-England, iScotland, Wales kunye ne-Northern Ireland. Amakomkhulu abo yiLondon, i-Edinburgh, iCardiff neBelfast ngokwahlukeneyo. Ngaphandle kweNgilani, amazwe anoorhulumente bawo abazimeleyo, ngalinye linamagunya ahlukeneyo. Ezinye izixeko eziphambili zibandakanya iBirmingham, iGlasgow, iLeeds, iLiverpool, neManchester. Indawo ekufutshane ye-Isle of Man, iBailiwick yaseGuernsey kunye neBailiwick yaseJersey abayonxalenye ye-UK, kuba ukuxhomekeka komqhele nguRhulumente wase-Bhritane onoxanduva lokuzikhusela nokumela amazwe. Umanyano phakathi koBukumkani baseNgilani (obabandakanya i-Wales) kunye ne-Kingdom yase-Scotland ngo-1707 ukwenza i-Kingdom yase-Great Britain, ilandelwa ngumanyano ngo-1801 wase-Great Britain kunye ne-Kingdom of Ireland yakha i-United Kingdom ye-Great Britain ne-Ireland. . Isithandathu kwisithandathu seIreland sahlukana ne-UK ngo-1922, sishiya ubumbano lwangoku lwe-United Kingdom ye-Great Britain kunye ne-Northern Ireland. Igama lase-UK lamkelwa ngo-1927 ukubonisa utshintsho. Kukho iMimandla yaseBritani engaphaya kweNqanawa, iindawo eziphantsi koBukhosi baseBritane, ekuphakameni kwayo ngeminyaka yee-1920, yayiquka phantse ikota yomhlaba obudibene nomhlaba kwaye yayiyeyonakumkani inkulu kwimbali. Impembelelo yaseBritane inokuqatshelwa kulwimi, inkcubeko kunye neenkqubo zopolitiko ezininzi zeekoloni zangaphambili. I-United Kingdom inoqoqosho lwehlabathi lwesithandathu ngobukhulu ngemveliso yekhaya ngokubanzi (GDP), kunye neyesithoba ngobukhulu ngokuthenga amandla ombane (PPP). Inezoqoqosho olunengeniso ephezulu kunye nenqanaba eliphezulu kakhulu lesalathiso sophuhliso lomntu, inqanaba le-15 kwihlabathi. Kwakuyilizwe lokuqala elinamashishini kwaye lelona lizwe lalinegunya eliphambili ngekhulu le-19 nasekuqaleni kwenkulungwane yama-20. I-UK ihlala ingamandla amakhulu, enoqoqosho olukhulu, inkcubeko, umkhosi, isayensi kunye nefuthe lezopolitiko kwilizwe jikelele. Yimeko yezixhobo zenyukliya eyaziwayo kwaye yeyesithandathu kwinkcitho yomkhosi emhlabeni. Ibililungu elisisigxina le-United Nations Security Council ukusukela kwesa sithuba sayo sokuqala ngo-1946. I-United Kingdom ililungu eliphambili kwi-Commonwealth of Nations, iBhunga lase-Europe, G7, G20, NATO, Umbutho wezoqoqosho Co -ukusebenza noPhuhliso (i-OECD), i-Interpol kunye noMbutho woRhwebo weHlabathi (i-WTO). Yayililungu le-European Union (i-EU) kunye nomanduleli wayo, iEuropean Economic Community (EEC), iminyaka engama-47, phakathi komhla woku-1 kuJanuwari 1973 nokurhoxa nge-31 kaJanuwari ka-2020.
Izikolo ezikufutshane SE1 2TH